3 Mandehana lavitra amin'ny lakilasy 5 mankany amin'ny marketing mailaka miavaka | Martech Zone
Alatsinainy Aprily 2, 2012 Sabotsy, Oktobra 25, 2014 Tempolin'i Lavon
Araka ny Fanadihadiana momba ny benchmark MarketingSherpa 2012, orinasa maromaro no mety hampiakatra ny tetibolan'ny mailaka maherin'ny 30% amin'ny 2012. Na izany aza, hitan'i Delivra fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mbola miady amin'ny tetika fototra mitovy amin'ny mailaka - fananganana lisitra, atiny, fampidirana, famolavolana, sns.
Aza mampitombo ny teti-bolanao mailaka raha tsy mifantoka mazava amin'ny zavatra tokony hatsaraina sy izay tsy tokony hatsaraina. Makà fotoana hifantohana amin'ny fototra; Ireo foto-kevitra fototra ireo no mahatonga ny programa marketing mailaka tsy manam-paharoa. Vao tsy ela akory izay dia namoaka fironana, antontanisa ary tolo-kevitra i Delivra. Ireto ambany ireto dia fiambenana telo:
Mamorona atiny miorina amin'ny angona. Ny famoronana atiny misy ifandraisany dia mety ho fanamby ho an'ireo mpivarotra mailaka. Manangona tahirin-kevitra mandrakariva momba ny mpihaino anao mba hahatonga ny atiny ho azo atao. Jereo hoe inona no tian'ny mpihaino henonao amin'ny alàlan'ny fanontaniany amin'ny foibem-panadihadiana na ivom-pifidianana.
Manome anao sisin'ny fifaninanana ny fizarana. ao amin'ny MarketingSherpa 2012 Fanadihadiana momba ny benchmark Marketing amin'ny mailaka, nanambara izy fa 95% amin'ireo orinasa mila manatsara ny fizarana lisitra. Aza avela any aoriana - atombohy mifantoka amin'ny fandavorariana ny fizarana misy anao izao!
Volavola ho an'ny finday, vanim-potoana. Araka io tatitra io ihany, ny 58% amin'ireo mpivarotra mailaka dia tsy mamorona mailaka hivadika amin'ny smartphone. Nanjary nalaza kokoa ny finday finday avo lenta, koa maninona ianao no tsy mamolavola mailaka amin'izany?
Tags: Content MarketingDatadelivramailaka MarketingMarketingSherpaFivarotana finday sy tablettesegmentationny fironana